ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးရဲ့ မြင်တွေ့ခဲရလွန်းတဲ့ စိန်ဖူးတော်ပါ လိုရာဆိုတောင်းပြီး မျှဝေပေးပါနော် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးရဲ့ မြင်တွေ့ခဲရလွန်းတဲ့ စိန်ဖူးတော်ပါ လိုရာဆိုတောင်းပြီး မျှဝေပေးပါနော်
လူတိုင်းမြင်ဖို့ခဲရင်းလှတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရဲ့ စိန်ဖူးတော်ပါ။ သင်မြင်တာနဲ့ချက်ချင်းရှယ်လိုက်ပါ ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ် အကြွေးဆပ်စရာရှိနေတာလား? အကြွေးတွေမရပဲဖြစ်နေတာလား? ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား? ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား? သောကများနေရတာလား?
ဤဂါထာကို ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် အဓိဌာန်တင်ပြီး ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရပါမယ် တစ်နေ့ကို ၂၄ခေါက်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။၂၄ရက်တိတိ နေရာမှန် အချိန်မှန်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။ မိမိ မွေးနေ့ကစတင်ပြီး ရွတ်ဆိုရပါမယ် ထိုရွတ်ဖတ် အဓိဌာန်ဝင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ မိမိတက်နိုင်သော နှစ်သက်ရာဒါန တစ်ခုပြုပေးရပါမယ် အဖျက်များသောကြောင့် ဇွဲကောင်းဖို့ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ ဒီ အချက်တွေလိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ငွေကြေး လာဘ်လာဘကံပွင့်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလ့ို ပြောလို့ရပါပြီ။
အလုပ်မရှိပဲနှင့်တော့ ငွေကြေးများများ လိုချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်ဆိုနေတဲ့ ငွေကြေးကံများ ရသင့်လျှက်ကြန့်ကြာနေသော ငွေကြေး လာဘ်လာဘများအပြင် အခြားသော နေရာများမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကံ နှင့် ကိုယ့်ရဲ့ သဒ္ဒါတရားပေါ် မူတည်ပြီး ငွေကြေးလာဘ်လာဘများ ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ၂၄ရက်ပြည့်ပြီးရင် တစ်ပတ်နားပြီး ကိုယ့်မွေးနေ့ရောက်မှ အဓိဌာန် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဝင်ရပါမယ်။
အရဟံဝတ လာဘံ အရမၼဏပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ အဓိပတိပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ သဟဇာတပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ အညမညပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ နိႆယပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ ဥပနိႆယပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ ပစာၦဇာတပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ ကမၼပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ ဝိပါကပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ အဟာရပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ ဈာနပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ မဂၢပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ သမၸယုတၱပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ အတၳိပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ နတၳိပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ ဝိဂတပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ အဝိဂတပစၥေယာတိ။
မနက် ၉ခေါက် ည ၉ခေါက်ရွတ်လည်းရပါတယ်။ ဂုဏ်တော် ပဌာန်းကျင့်စဉ်မိုလို့ အမြတ်ဆုံးတွေကို ပွားများရတာဖြစ်လို့ လာဘ်လာဘမမျှော်ကိုးပဲ ကြည်ညိုစိတ်ဖြင့် ရွတ်ဆိုပူဇော်ပါက ပို၍ အကျိုးထူးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်….credit original poster
အသက်ကြီးပေမယ့် အနားမနေဘဲ ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက် လုပ်အားပေးတဲ့ အဘွား ၄ ဦး
၂၆ နှစ်အတွင်း” တစ်ကြိမ်မျှလှဲလျောင်း အိပ်စက်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့” ကျောက်ဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး